Iindumiso yezempilo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngamanye amaxesha sibeka umzamo wethu wokucela uthando, imali, impumelelo kwaye siphantse silibale ukucela impilo yethu. Ukuba okwangoku ukwimeko embi yezempilo, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda eli nqaku kwaye siza kukubonisa Indumiso yempilo uthanda eyona ukuthandaza.
1 Yeyiphi iNdumiso ngempilo ekufuneka uyithandaze ngamaxesha wokugula?
2 Iindinyana zeBhayibhile zokuPhilisa
2.1 Ucoceko nokuthobela
2.2 Ukunqula uThixo kuzisa iintsikelelo
2.3 UThixo unika abantwana bakhe impilo yokomoya neyasemzimbeni
2.4 UThixo uyasiva isikhalo sethu
2.5 Ilizwi likaThixo lisinika ubomi
2.6 Umsebenzi kaYesu emnqamlezweni
2.7 Abafundi banegunya lokuphilisa
Yeyiphi iNdumiso ngempilo ekufuneka uyithandaze ngamaxesha wokugula?
Nangona singenayo inkolo, sihlala siphendukela elukholweni xa ukugula kusiza kuthi ngaxa lithile, amaxesha amaninzi siyakhathazeka kwaye siphethukela kukholo ukuze sive kamnandi. Njengokuba ivesi ebhayibhileni isithi "Cela uzokunikwa" iphindaphinda ukuba ngamaxesha osweleko kusinceda ukuba sime siqinile.
Ebhayibhelini zininzi iindawo ezibhekisa ekuphiliseni nasekuphiliseni, ngakumbi kwincwadi yeeNdumiso, kukho iindinyana ezahlukeneyo ezinokusinceda ukuba sicamngce kwaye sithandaze ngala maxesha xa siphulukene nempilo.
Kufuneka sihlale sicinga ukuba uThixo unathi, masithandaze sithembele! Kuba usoloko esimamela kwaye usinceda ngokokuthanda kwakhe.
Le ndumiso ilandelayo inokuba yeyona vesi ithuthuzelayo kuye nakubani na onengxaki yesifo kwaye yiNdumiso 41: UThixo nguMphilisi kwaye uthi ngale ndlela ilandelayo: Unoyolo ocingela ababuthathaka nabagulayo; NguYehova oya kumhlangula ngamaxesha okubandezeleka okukhulu, amkhusele, alondoloze ubomi bakhe; UYehova uya kukuthumela intsikelelo yakhe emhlabeni kwaye akayi kukukhusela kwiintshaba zakho. INkosi iya kuyibamba emandlalweni wokugula, ndathi, Ndenzele inceba, Nkosi; Ndiphilise, ndiphilise, kuba ndonile kuwe "
Iindinyana zeBhayibhile zokuPhilisa
Njengabantu esingabo, sisesichengeni sempilo yemizimba yethu esilelayo kwaye sinesifo esithile okanye siphelelwa ngamandla kukuhamba kwexesha.
Kufuneka sijongane nazo zonke iintlobo zemiceli mngeni ngokubhekisele kwimpilo yethu, nokuba yeyokoyisa ingqele, uxinzelelo lwegazi okanye esinye isifo esibi kakhulu.
Ithini yona iBhayibhile ngokuPhilisa? Uthi kufuneka sihlale simcela uThixo ukuba asikhusele nakweyiphi na i-pathology kwaye sihlale simcela ukuba asinike impilo, kuba uThixo uyayimamela yonke imithandazo yethu kunye nemisebenzi ukuze sihlale sinempilo yomzimba, yokomoya neyomphefumlo.
Zininzi iivesi zeBhayibhile ezithetha ngokunyanga izifo, apha ngezantsi siza kukufundisa ezinye zazo.
En IEksodus 15:26 UThixo uyasiqinisekisa ukuba uyakubanika impilo abantu bakhe. UThixo wasikhulula ebukhobokeni baseJiphutha kwaye babewazi amandla akhe, uthando lwakhe kunye nokukhathalela kwakhe konke. Ukuze uThixo abahlangule kuzo zonke izifo nezifo abaziphetheyo eYiputa, njengabantu bakaThixo abalandela imiyalelo yakhe, benze ngobulungisa kwaye baphile ngokuthobela imiyalelo yakhe.
Ukunqula uThixo kuzisa iintsikelelo
IEksodus 23:25. Mnqule uNdikhoyo, uThixo wakho, khon 'ukuze asikelele isonka sakho namanzi akho. Ndiya kususa konke ukugula kuwe.
Kule vesi uThixo ukhumbuza abantu bakhe ukuba mabanqule yena yedwa kuba uThixo akahlali etroneni yakhe nantoni na okanye nabani na kwaye yinto ekufuneka ihlale ikhunjulwa njengabantu beNkosi. Ngokuhlala simthobela, sifumana intsikelelo ukuze sibe nayo yonke into esiyifunayo ukuze siphile ngokwasemzimbeni nangokomoya, ikwabonelela ngempilo yomzimba wethu.
UThixo unika abantwana bakhe impilo yokomoya neyasemzimbeni
Kulo INdumiso 103: 1-3 Umphefumlo wethu uhlaziyekile ukuba sigcina kuphela ingqalelo yethu kwiintsikelelo namathuba uThixo asinika wona. Kubalulekile ukukhumbula konke okuhle uThixo asinike kona nako konke asenzele kona xa sisebunzimeni.
Le ndumiso ikwasikhumbuza ukuba uThixo usinike ubomi obungunaphakade, esixolela izono zethu kwaye asuse ukukhathazeka ngokomoya nangokwenyama, kuba amandla akhe awanamda.
UThixo uyasiva isikhalo sethu
Kufuneka sikhale kuThixo xa sinesifo kuba uyasimamela kwaye uyakusisebenzela. Inkqubo ye- INdumiso 107: 19-20 ibonisa ukuba abantu bakwa-Israyeli ngaxesha lithile baziva bebuhlungu kakhulu, emva koko baphakamisa isikhalo sabo kuThixo, wabanika usindiso kunye nokuphilisa ngokuthumela ilizwi lakhe ukubaphilisa ngesithunywa esabahlangulayo ukufa ikhuselekile. Xa intliziyo yakho izimisele ukuphilisa, akukho nto ingenakwenzeka kuThixo.
Ilizwi likaThixo lisinika ubomi
IMizekeliso 4: 20-22 Kuthetha ukuba ilizwi likaThixo linobulumko obukhulu kwaye ke kufuneka lilandelwe kwaye ligcinwe njengobuncwane ezintliziyweni zethu. UThixo uhlala efuna okona kulungileyo kuthi, ke kufuneka siphile ngendlela athanda ngayo kwaye njengoko esixelela ukuba sifumane ubomi bokomoya kunye nempilo entle ngokwasemzimbeni nasengqondweni.
Amaxesha amaninzi, ngokumnika lonke ixhala lethu, umzimba wethu uhlaziywa kwaye uzaliswe luxolo xa sonwabile sikunye naye.
Umsebenzi kaYesu emnqamlezweni
UYesu wathwala izifo zethu kunye neentlungu, kodwa sabona kuphela amanxeba akhe kwaye wabethwa nguThixo kwaye wahlaziswa. Wahlatywa kukuvukela kwethu kwaye wancitshiswa ngobugwenxa bethu, isohlwayo sehlela kuye, kwaye saphiliswa ngamanxeba akhe. Oku kuthethwe ku-Isaya 53-4-5.
Kwezi ndinyana u-Isaya uprofeta ngokufa kukaYesu xa wayebethelelwa emnqamlezweni kunye nendlela awayezithwala ngayo iintlungu zethu ngokwasemzimbeni, ngokweemvakalelo nangokomoya. Oku kugxininisa kuthi ukuba asisodwa xa sinamaxesha okubandezeleka kuba uYesu unathi kwaye uyakuqonda ukubandezeleka esijamelana nako.
Abafundi banegunya lokuphilisa
Kucetyiswa ukuba naphina apho baya khona bathathe into ethethwa kuMateyu 10: 7-8 2 "Ubukumkani bamazulu busondele." Xa ubukumkani bukaThixo bubonakalisiwe, kwenzeka imimangaliso emikhulu, inkululeko kunye nokuphilisa nasiphi na isifo, kuba uThixo ungusomandla kwaye ubasikelela bonke abasondele kuye.
Kwiyoku-1 kwabaseKorinte 12: 9 sinokufumanisa ukuba uThixo unika ibandla isipho sokuphilisa, kuba ufuna ukusikelela, ukuphilisa nokubuyisela bonke abamfunayo.
Ukuba ulithandile eli nqaku, siyakumema ukuba undwendwele eli khonkco lilandelayo ukuze wazi enye yazo Umthandazo womntu ogulayo ukuba unokuthatha ingqalelo.
Isikhokelo sokuthandaza iirosari